ကြွားတာပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကြွားတာပါ	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 12, 2016 in My Dear Diary |7comments
သင့်အေးရိပ် says: ဒီ ရွာဟာ…အွန်လိုင်းမီဒီယာချည်းသာ မဟုတ်….
ပရင့်မီဒီယာနဲ့လည်း ဟောဒီလို ပေါင်းကူးဆက်ဆံထားတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ…. ————————————
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: 2015ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးမှာ ” လုံးပါး ပါး တဲ့ ဆန်သမား ” တစ်ပုဒ်ထဲဘဲ
2016 မှာ ပထမဆုံးပို့လိုက်တဲ့စာမူလေးက
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: မိုက် မိုက် မိုက်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လိုက် လိုက် လိုက်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုပေါက်ရေ
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်နေတာပဲ
Ma Ma says: ကြွားပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတာ ကြာပြီ။
ပြန်မန့်ဖို့ sign in ၀င်မရတာနဲ့ပဲ ခုမှ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း လုပ်ရတော့မယ်။
ကြွားနိုင်လို့ ကြွားတာကို မုဒိတာပွားပါတယ်။